, असोज २ गतेदेखि ३० गतेसम्म मलमास, मलमासमा के गर्ने, के नगर्ने ?
असोज २ गतेदेखि ३० गतेसम्म मलमास, मलमासमा के गर्ने, के नगर्ने ?
12750 पटक पढिएको
काठमाडौँ, ३० भदौ । यस वर्ष असोज २ गते शुक्रबारदेखि ३० गते शुक्रबारसम्म मलमास अथवा अधिकमास परेको नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले जनाएको छ । ज्योतिषीय गणनाअनुसार ३६५ दिनको वर्ष हुन्छ । वर्षमा सौर र चान्द्रमास हुन्छन् । दुवैलाई समन्वय गर्न ३२ महिना १६ दिन एक घण्टा ३६ मिनेटमा मलमास वा अधिकमास आउँछ । एउटा औँसीदेखि अर्को औँसीसम्म सङ्क्रान्ति छैन भने त्यो महिनालाई मलमास भनिन्छ ।